MAEVATANANA - BETSIBOKA : Mitrandraka volamena ireo Sinoa mpanao toho-drano
Manao tany lavitra andriana ireo terany sinoa amin’ny fitrandrahana volamena ao amin’ny Faritra Betsiboka Maevatanàna efa an-taona maro. 10 avril 2017
Amina kilao maromaro no trandrahin’ireo Sinoa, izay haondrana mankany ivelany. Tsy mazava amin’ireo vahoaka ny fifanarahana marina teo amin’ny Fanjakana malagasy sy ireo teratany vahiny ireo amin’ny fitrandrahana harena an-kibony ny tany eto Madagasikara, indrindra ao Maevatanàna.
Nolazaina fa manomana ny fanamboarana ny toho-drano ao Marodoka ireo Sinoa nefa manararaotra mitrandraka ny harenan’ny Malagasy izy ireo. Io fanamboarana ny asa hahazoana herinaratra io anefa, hoy ireo vahoaka izay nanome loharanom-baovao, no entina ilazana fa miasa ho antsika ny vahiny.
Tapitra lasan’izy ireo avokoa ny ankamaroan’ny volamena ao ary vidin’izy ireo amin’ny vidiny mora izany raha toa ka misy Malagasy izay mivarotra izany amin’izy ireo. Mihena ny tahan’ny olona tonga mividy volamena ao Maevatanàna noho ny fanararaotana ataon’ireo Sinoa amin’ny vidiny sy ny fitrandahana atao.
Mitaraina amin’ny mpitondra ao an-toerana ihany ireo vahoaka, izay mivelona amin’ity fitrandrahana harena ankibon’ny tany ity saingy tsy misy valiny izany. Hatreto aloha dia nilaza ny hanohitra ireo Sinoa mitrandraka ny harem-pirenena tsy ara-dalàna ny vahoaka. Voalaza hatrany fa misy mpitondra ambony miara- miasa amin’izy ireo nahafahan’ireto farany mitrandraka ao.
Raha tsiahivina dia isan’ireo kazarana volamena tsara kalitao ny avy ao Maevatanàna, ka rariny sy hitsiny ireo vahoaka raha saro-piaro amin’ny fananan’ny Malagasy. Tokana eran-tany ny karazam-bolamena eto Madagasikara, ka tsy tokony halain’ny vahiny ambogadiny izany.